Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- गौरलाई नमुना नगरपालिका बनाउँछु : मेयर साह
शम्भु साह, नगरप्रमुख, गौर नगरपालिका, रौतहट
० गौर नगरपालिकाको समग्र विकासका लागि के के कुरा प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
— शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणका कामलगायत सबै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नगरको समग्र विकासका लागि काम गर्नेछु । गौर नगरलाई ग्रीन सिटी बनाउने पनि मेरो योजना छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न नगरवासीको सहयोग पनि आवश्यक हुन्छ । प्रत्येक घरधनीले कम्तिमा एउटा रूख आफ्नो घरमा लगाउनुपर्छ ।
० तपाईँ हालै निर्वाचित हुनुभएको छ । गौरको विकासमा सबभन्दा चुनौती कहाँ पाउनुभयो ?
— गौर नगरपालिका दुई वटा नदीको बीचमा पर्छ । एकतिर बागमती छ भने अर्कोतिर बकैया नदी रहेको छ । दुवै नदीबाट गौर नगरपालिका घेरिएको छ । वर्षामा गौर जलमग्न नै हुने गर्छ । बढी वर्षा हुँदा बाढी नै आउने गरेको छ । ढुवान र बाढीका कारण यहाँका सर्वसाधारण, किसान, व्यापारीसहित सबैलाई समस्या हुने गरेको छ । ढुबान समस्या यहाँको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । विगतमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पहलमा बाँधको आयोजना ल्याइएको थियो । त्यो आयोजनाका कारण १५ वर्षसम्म हामी बाढीको प्रकोपबाट बचेका थियौँ । त्यसपछि बाँध जीर्ण हुँदै गयो । समय समयमा मर्मत नभएकाले कारणले पुनः बाढीको समस्या देखिएको हो । अर्को कुरा गौर नगरपालिकामा बनेका नालाहरू लेबलमा छैनन् । लेबलमा नहुँदा पानी निकासको धेरै समस्या छ । त्यस्तैले ढल निकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब स्थानीय तहबाट मात्र डुबान समस्याको निराकरण हुँदैन केन्द्रबाट पनि बजेटको आवश्यकता हुन्छ । त्यस्तै, गौर नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पनि दयनीय रहेको छ । यी विद्यालयले दिने शिक्षा पनि गुणस्तरीय भेटिएन । अनुमगनका क्रममा कक्षा तीनमा पढ्ने विद्यार्थीलाईसमेत च, छ, ज लेख्न नआएको मैले पाएको छु । यसको कारण पनि म भन्छु । विगतमा आफ्ना आसेपासे कार्यकर्ताहरूलाई करारमा शिक्षक नियुक्ति गरेका कारणले यो अवस्था आएको हो । यसले गर्दा शिक्षामा पनि धेरै चुनौती छ । स्थास्थ्य क्षेत्रमा जिल्ला अस्पताल छ । तर, सरसफाइ छैन । दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था छैन । उपकरण छ, तर चलाउने चिकित्सक छैन । यस्ता समस्याहरू छन् । डायलासिस मेसिन छ, तर चलाउने व्यक्ति छैन । बिरामीहरूलाई वीरगञ्ज अथवा भारततर्फ जानुपर्ने बाध्यता छ । कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बाढीका कारण कृषकहरू मारमा परिरहेका छन् ।
० त्यसो भए यी समस्याहरूबाट गौर नगरवासीले मुक्त पाउँछन् त तपाईँको कार्यकालमा ?
— म लागिपरेको छु । फेरि लागेर मात्र हुँदैन । यसमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको पनि ध्यानाकर्षण हुुनुपर्छ । किन भने बजेटको कुरा छ । काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । सरकारले सहयोग गरे गौर नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिका बनाउँछु । यहाँ खेलकुद मैदानको पनि कमी रहेको छ । गौरमा एउटा राइस मिल छ । जुन विवादास्पद छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया थाल्नुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । मुआब्जा नदिई जमिन अधिग्रहण नहुने, मुआब्जाका लागि १५ करोड चाहिन्छ । त्यो स्थानीय तहबाट सम्भव छैन । हामीसँग खेलकुद मैदान पनि छैन ।
० तपाईँले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धताहरू के के छन् ?
— मैले चारवटा झोलुङ्गे पुल भनेको थिएँ । यस क्षेत्रका नदीको वारपार गर्न यो आवश्यक छ । हुन त पुल निर्माण ठेक्का पनि भइसकेको छ । तर, समयमा ठेकेदारले निर्माण नगर्दा उसलाई कारबाही पनि गरिएको थियो । आन्दोलन पनि भएको थियो । पुल नबन्दा डुंगा दुर्घटना भएर मानिसको समेत मृत्यु भएको थियो । बारम्बार यहाँ समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । पुल नहुँदा यहाँका स्थानीयलाई ओहोरदोहोर गर्न गाह्रो हुने गरेको छ । झोलुङ्गे पुल बनेपछि सहज हुने थियो । त्यस्तै, गरिब किसानहरूका लागि ३० युनिटसम्म विजुली निशुल्क दिने प्रतिबद्धता गरेको छु । विपन्न परिवारलाई विजुली बत्तीको पैसा तिर्ने क्षमता नै नभएको पनि मैले देखेको छु । त्यसैले पाँच–छ एम्पियरको विजुली प्रयोग गर्नेलाई ३० युनिटसम्म निशुल्क गर्ने पनि प्रतिबद्धता गरेको छु । त्यस्तै, खानेपानीको हकमा १० हजार लिटरसम्म खानेपानी निशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छु । यसको लागि बोर्डिङको व्यवस्था वा खानेपानी कार्यालयबाट निशुल्क गराउन सकिन्छ । त्यस्तै, राइस मिललाई खेलकुद मैदान बनाउन अधिग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छु । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने, किसानहरूका समस्याको समाधान गर्नेलगायतका कुराहरू छन् ।
० गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिँदै आएको छ । गौरका जनताले त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएका थिए ?
— पहिला थिएन । तर, अहिले हामीले प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्षहरूलाई दुई घण्टामा हुँदै आएको काम पाँच मिनेटमा गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौँ । अनावश्यक रूपमा जनतालाई दुःख दिन मिल्दैन । एउटै कामका लागि पटक पटक नगरपालिकामा धाइरहनु नपरोस्, यसका लागि हामी सचेत छौँ । सिंहदरबार गाउँमा छ भन्ने अनुभूति जनतालाई हामी दिलाउँछौँ ।